Sidunga imimoya esokunxephezela abalimi eZimbabwe | Bayede News
Home/ Imibono/ Ezamazwe Ngamazwe/Sidunga imimoya esokunxephezela abalimi eZimbabwe
ISINQUMO sikaHulumeni waseZimbabwe sokunxephezela ondlebezikhanyilanga abangabalimi ngokulahlekelwa amasimu nomhlaba ‘wabo’ sesidale izinkulumo eziningi kuleliya lizwe. Edalula lesi sinqumo uHulumeni waseZimbabwe uveze ukuthi kwisabelomali sonyaka kunezigiqi ezingama-R238 esezibekelwe ukunxephezela laba balimi.
UHulumeni uphinde waveza nokuthi kunemibandela ehambisana nalesi sinqumo okuzomele ilandelwe ngaphambi kokuba kunxeshezelwe njengokuthi izinxephezelo zizokhishelwa ingqalasizinda nezakhiwo kumapulazi kodwa aziqondile ukukhokhela umhlaba. Okunye ukuthi kuzoshicilelwa uhla lwalabo abadinga ukukhokhelwa ngokushesha ngenxa yokuthi isimo sabo sezenhlalakahle sibucayi kakhulu emveni kokulahlekelwa umhlaba obubalethela inzuzo njengabalimi.
Izinkulumo esezikhona ezweni zikhombisa ukuphambana kwemibono. Kukhona abasesekayo nabasigxekayo lesi sinqumo sokunxephezela abalimi mayelana nezigameko zeminyaka edlule ezenzeka ngenkathi uMnu uRobert Mugabe esenguMengameli. Ngaleso sikhathi uHulumeni weza nohlelo lokubuyisela umhlaba kwabangabokudabuka eZimbabwe. Ngaleyo minyaka babelinganiselwa ezi-4 500 abalimi abaphucwa umhlaba, wanikezwa izakhamuzi ezisondele kuma -300 000. Isinqumo sikaMugabe sagxekwa ngabaningi ikakhulukazi abelungu kanye nezinhlaka ezahlukene ezizimele.
Kulabo abathakasela lesi nqumo kungabalwa iCommercial Farmers Union (CFU) yase Zimbabwe okuyiyo ebihola imikhankaso yangaphambili yokulwa nezinyathelo zika Mugabe, yaphinde yafaka ingcindezi kuHulumeni ka Mengameli u-Emmerson Mnangagwa yokuthi okungenani laba balimi abathole isinxephezelo.
Siphinde sithakaselwe ngabaningi abazinze emazweni aseNyakatho abathi lesi sinqumo sikhombisa ukuzimisela kuka Hulumeni ukwenza ubulungiswa eZimbabwe baphinde basithathe njengesiqinisa amathemba okuthi uMengameli u-Emmerson Mnangagwa uzokwenza kangcono kunoMugabe ekuphatheni kahle izintambo zombuso.
Kukhona abaphinde bathi sizogcwalisela kwimizamo yokuthi abatshalizimali basibone isidingo sokuvuselela ubudlelwano obuqinile kwezohwebo nezezimboni eZimbabwe.
Ngakolunye uhlangothi akhona amazwi akhalazayo ngalesi sinqumo okuthiwa siqonde ukufeza izifiso zakudala zoHulumeni abathize baseNyakatho zokuthi leli lizwe liqhubeke nokuvikela kuphela amalungelo alabo balimi abamhlophe base Zimbabwe.
Ngoku kaHulumeni lesi sinqumo usibona njengesinye sezinyathelo okumele usithathe ukuze uvuselele futhi wakhe kabusha ubudlelwano namazwe aseNyakatho.
Kuzokhumbuleka ukuthi ukuthi kwezinye zezingqinamba uMengameli uMnangagwa abhekene nazo, kusekhona ijoka lonswinyo olwafakwa yi-USA nesamile ekutheni kumele luqhubeke. Ngenxa yalokho isinyathelo esinjena sibonwa njenge gxenye yecebo likaHulumeni lokuthi kuqaqeke afindo obudlelwane namazwe ase Nyakatho.
Abagxeka lesi sinqumo bathi, uHulumeni akanaso isiqiniseko sokuthi lesi sinyathelo sizokwenza lamazwe ayibuke ngelinye iso yini iZimbabwe kodwa kunalokho singase siveze ezinye izikhalazo kuwona lamazwe ngoba awadeli. Enye yemibuzo evelayo ngokugxeka lesi sinqumo ukuthi yini ozokwazi ukuyenza uHulumeni waseZimbabwe uma lesi sinqumo singezi nezithelo ocabanga ukuthi uzozidala.
Kodwa kubona bonke abagxeka lesi sinqumo amazwi okubonakala ehlabe aphukele yilawo athi loHulumeni ukhombisa ukuthi usukhohliwe lapho uqhamuka khona, nokuthi uholwa yiqembu elizigqajayo ngeqhaza elalibamba ngeminyaka eyayinima yokulwela inkululeko.
Eyokubuyiselwa komhlaba kubaniniwo kwabe kuyinto ebaluleke kwizethulo ezaqhamuka emaqenjini ayelwela inkululeko eZimbabwe, mhla ebamba izingxoxo noHulumeni kaMnu u-Ian Smith owayephethe ngesikhathi izwe lisabizwa ngeRhodesia okwaze kwaba unyaka we-1979.
Abaholi abanjengoMugabe no Dkt uJoshua Nkomo, umphako ababewuphethe beya kulezi zingxoxo wawuthi impi yenkululeko yaqala ngenxa yokuqolwa komhlaba yizifiki ngakho kumele ubuyiswe ngaphandle kwemibandela, ngisho izinxephezelo.
Kodwa lezi zingxoxo zaphetha ngokuthi laba baholi babuye nenduku yombangandlala.
Kwaphela iminyaka engama-20 eyokubuyiswa komhlaba incike kubalimi abanentando yokuthengisa, kanye nalabo abanezifiso nemali yokuthi bawuthenge umhlaba.
Lesi sinqumo sigxekelwa ukuthi sivusa amaxeba akudala okuthi vele uHulumeni wase Zimbabwe emveni kokuthola inkululeko wehluleka ukubuyisa umhlaba, kodwa bayakwazi ukunxephezela abokufika.
Kukho konke lokhu, okuxakayo ngukuthi uHulumeni awukawuphothuli umsebenzi wokucwaninga ukuthi lithini inani nezindleko zengqalasizinda kuma pulazi athintekayo. Lokhu kuthiwa kuzophothulwa ezinyangeni ezizayo okusho ukuthi le mali okuthiwa isibekelwe ukunxephezela kungenzeka ibe ngaphezulu. Okunye, yisimemezelo sokuthi uma kunesidingo, uHulumeni kaMnangagwa okuxhumana nezinhlangano zomhlaba ezibolekisa ngemali ukuze ukwazi ukumelana nalesi sinqumo.
Lokhu kuchaza ukuthi lo Hulumeni uzimisele ukungena ezikweletini ukuze ubhekane izikhalazo zabambalwa ezweni, ekubeni usabhekene nezikhalazo ngokwentuleka kwemisebenzi; ukwenyuka kwentengo yezidingo zanjalo, nesimo somnotho esibucayi esithinta iningi lezakhamuzi.
Phezu kwalokho, akukapheli zinsuku wona lo Hulumeni wenze isicelo obusibhekise kubaboleki zimali sokuthi uxhaswe ngemali elinganiselwa kwizigidi ezevile kuma-US$300 ukuze ukwazi ukubhekelela labo abathintekile ngenxa kazamcolo nezikhukhula ebezihlasele leli lizwe emasontweni edlule.
Konke lokhu kwenza kubuzwe ukuthi esokunxephezela laba balimi sizosiza ngani . UMnu Senzo Ngubane, uNgoti ozimele kwezocwaningo lokudala ukubuyisana nokuthula ezwenikazi i-Afrika.